Maitiro ekuomesa chikamu cheLinux kana hard drive kubva kune iyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuomesa chikamu cheLinux kana hard drive kubva kune iyo terminal
Nhasi, yakawanda yedu data rakakosha inochengeterwa pane rakaomarara dhiraivha. Kuti tidzivise kurasikirwa tinogona kuita backup makopi, chimwe chinhu chatinogona zvakare kuita mumwaka akasiyana aripo. Kana zviri zvikamu kana madhiraivhu akaomarara, chishandiso chakanakisa chandakaedza pane chero sisitimu yekushandisa iApple's Time Machine, sisitimu iyo inoteedzera otomatiki sisitimu yese neyakagadziriswa chete uye dhisiki rekunze. Sarudzo yekutora clone kupatsanura kana hard drive muLinux tinogona kuiwana mune inouraya.
Muchikamu chino tiri kuzobata nekoniyoni, ndiko kuti, zvatichazoteedzera zvichave zvakangofanana pane chimwe chikamu kana hard drive. Kana zvese zvatinoda kusevha imwe data yakakosha isu tinofanirwa kushandisa zvimwe zvishandiso kana kutoita kopi yemanyorero. Isu tinofanirwa zvakare kuziva kuti chishandiso chatichazoshandisa ndicho chinongedzo, saka hakuzove neanoshandisa mushandisi yatinogona kushandisa negonzo sezviri Clonezilla (kungodaro daro).
1 Maitiro ekuenzanisa chikamu
2 Maitiro ekuomesa rese rakaomarara dhiraivha
3 Maitiro eku backup yedu MBR
Maitiro ekuenzanisa chikamu
Nemurairo «dd» tinogona kuteedzera diski rese kana chikamu chimwe chete. Chinhu chekutanga chatichaita kuenzanisa chikamu. Muchiitiko chatinacho / dev / sdb y / dev / sdc, Tinofanira kuenzanisa / dev / sdb1 en dev / sdc1. Tichazviita nekutevera matanho aya.
Nemirairo fdisk isu tinonyora izvo zvikamu:
fdisk -l /dev/sdb1/ /dev/sdc1
Tevere, isu tinonongedza kukamura / dev / sdb1 en dev / sdc1 nemurairo "dd":
dd if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc1
Iwo wekuraira pamusoro unotaurira "dd" kushandisa / dev / sbd1 senge yekuisa uye woinyora kuti ibudise / dev / sdc1. Mushure mekuumbiridza, tinogona kutarisa chimiro chemadhisiki ese nemirairo inotevera:
fdisk -l /dev/sdb1 /dev/sdc1
Maitiro ekuomesa rese rakaomarara dhiraivha
Iyo yapfuura nzira ichatibatsira isu kuenzanisa chikamu. Kana izvo zvatinoda zviri clone yakazara hard drive, dhisiki rinobuda rinofanira kunge rakaenzana kana kukura kupfuura dhisiki rekuisa. Tichanamatira diski / sdb en / sdc nemurairo uyu:
Kana isu tichida kutarisa chimiro chemadhisiki mushure mekuumbana, isu tinoshandisa uyu mumwe murairo:
fdisk -l /dev/sdb /dev/sdc
Maitiro eku backup yedu MBR
Iyo "dd" yekuraira inogona zvakare kushandiswa kugadzira backup yeedu MBR (Master Boot Record), iri muchikamu chekutanga chechigadzirwa chedu, pamberi pechikamu chekutanga. Kugadzira kopi yekuchengetedza yeMBR yedu, isu tinonyora unotevera kuraira:
dd if=/dev/sda of=/backup/mbr.img bs=512 count=1
Iwo uri pamusoro kuraira unobvunza "dd" kuteedzera / dev / sda en /backup/mbr.img ine nhanho ye512 byte uye iyo sarudzo sarudzo inokukumbira kuteedzera bhuroka. Mune mamwe mazwi, zvinokurudzira iwe kuteedzera ekutanga 512 mabheti e / dev / sda mufaira ratakapa.
Iwe unotoziva here kuomesa chikamu kana dhiraidhi muLinux kubva kune iyo terminal?
Chii chinonzi Clonezilla? Shamwari yako pakatarisana nenjodzi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuomesa chikamu cheLinux kana hard drive kubva kune iyo terminal
Jonathan Castillo akadaro
Mhoro linux vakapindwa muropa. Mushure mekuumba chikamu, maitiro ekudzoreredza =
Pindura kuna Jonathan Castillo
Openpilot: yakavhurwa sosi chirongwa chemota dzakazvimiririra
HPE inosimbisa mumunda we supercomputing nekutenga kweCray